Phupha ngeCabin Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Iikhabhathi ngamagumbi amancinci kwizikhephe. Ngenxa yobunzima bayo obuqhelekileyo, obumnyama kunye nokusebenza, abantu abaninzi bakufumanisa kungonwabisi kwaye kucinezela ukuhlala kwindawo enjalo.
Abanye, ngakumbi abantu abathanda ukuba semikhombeni kwaye bathanda ukuhamba emanzini, abazixhalabisi kangako ngezi zinto zekhabhathi. Ke ngoko, amaphupha apho umntu ekubhekiswa kuye elorini nawo aqwalaselwa ngokwahlukileyo. Ukutolikwa kwala maphupha, nangona kunjalo, ubukhulu becala kuxhomekeke kwiimvakalelo ezivakalayo. Endaweni yoko, kufuneka zibonwe njengesimemo sokuphinda ucinge ngemeko yakho yangoku ebomini.
1 Uphawu lwephupha «ikhabhathi» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ikhabhathi» - ukutolikwa kwengqondo
3 Isimboli yephupha «ikhabhathi» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ikhabhathi» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukuba ubona kuphela ikhabhathi ephupheni lakho, ungakwenza oku njengesibhengezo hamba kungekudala bamba. Oku kunokwenzeka ukuba kwenzeke kwinqanawa okanye ngenqanawa, kuxhomekeke ephupheni.
Ukongeza, nangona kunjalo, uphawu lwephupha lunokuqulatha isilumkiso samaxesha amabi. Ukuphupha kuyasongela Iimbambano y ingxaki kusapho lwakho. Ke ngoko, kuya kufuneka uzame kwangaphambili ukuba ube nobubele kwaye uphathe amalungu osapho lwakho ngokunyamezelana kwaye ungavulelekanga kakhulu kwingxoxo.
Cabin amaphupha, ngokoluvo oluqhelekileyo, ngamanye amaxesha iisimboli zento yokuba baphupha ngento ethile umtyholwa iya kuba. Oku kungabhekisa kwinkqubo yezomthetho okanye kwakhona kubudlelwane bosapho bakho. Umntu ochaphazelekayo kuya kufuneka azilungelelanise neengxaki ngandlela thile ukuze abonakalise uluvo lwakhe ngokuqinisekileyo. Ukoyiswa okunzulu kuyamsongela.
Ngubani na osekhabini ephupheni, kaninzi, ngokutolikwa ngokubanzi engagqitywanga kwaye ayinakho ukumela nokunyanzelisa iimbono ezithile zobuqu ngokucacileyo ngokwaneleyo. Kuya kufuneka uzame ukusebenza ngokuzithemba kwakho kwaye uziqinise ngakumbi phambi kwabanye kubomi bemihla ngemihla. Into efunekayo kuqala kule nto, kunjalo, kukuchaza ngokucacileyo nokumisela ezakho izimvo. Ngaphandle koko, umphuphi akanakuze akwazi ukufezekisa iinjongo zakhe.
Uphawu lwephupha «ikhabhathi» - ukutolikwa kwengqondo
Iingcali zengqondo zibona kuphawu lwephupha, ngakumbi, ukubamfitshane kunye nobumnyama bendlu njengamandla alawula kwaye azilolonge.
Kwelinye icala, ngokwale ndawo yokujonga, kukho ingozi yokuphupha ngokwakho ngamandla kwindawo ekungqongileyo khuphela ngaphandle kwaye ngale ndlela ungena kwindlela yokuphumeza ezakho izimvo kunye neenjongo.
Kwelinye icala, kunokwenzeka ukuba umntu ochaphazelekayo azive ethintelwe kubomi bemihla ngemihla ngamacandelo athile kwaye akasaboyiki. ulawulo ukuba nobakho ubomi. Kule meko, kufuneka utshintsho olwenza ukuba amaphupha akwazi ukuzilawula kwakhona, apho ubomi bakhe bufanele ukubaleka khona kwaye zeziphi iinjongo ngqo azibonayo. Umzekelo, ukufudukela kwesinye isixeko okanye utshintsho lomsebenzi unokuqwalaselwa.
Isimboli yephupha «ikhabhathi» - ukutolika kokomoya
Ngengqiqo yokomoya, uphawu lwephupha "ikhabhathi" lihambelana kakhulu nenqanawa, esisimboli sayo somoya. Uhambo lobomi Imele. Ke ngoko, i-cabin inokunika ulwazi malunga nokuba liphupha liphi elinokuqulatha ebomini bakho kwaye ngengqiqo kufuneka ujongane nezinto ezithile.